Ciidamada Koonfur Galbeed oo goor dhaw la wareegay Deegaanka Goofgaduud ee Gobolka Baay – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa goor dhaw la wareegay gacan ku haynta Deegaanka Goofgaduud oo Qiyaastii Magaalada Baydhabo u jirta 30-KM.
Ciidamada uu hogaaminaayo Wasiirka Hub Ka Dhigista & Dhaqancelinta Maamulka Koonfur Galbeed,Xasan Xuseen Maxamed (Xasan Eelaay), oo tiradooda ay gaareyso 500 oo Askari ayaa gudaha u galay Deegaanka Goofgaduud.
Wararka waxa ay sheegayaan ciidamada oo aanan la kulmin wax iska caabin ah inay qabsadeen deegaankaan, kadib markii ciidamada Ururka Al Shabaab ay halkaasi isaga baxeen.
Xaalada Deegaanka Goofgaduud ayaa degan, waxaana si buuxda hada gacanta ugu haayo ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed.
Ciidamadan la wareegay gacan ku haynta deegaanka Goofgaduud, ayaa waxa ay yihiin ciidamo laga soo kala qoray deeganada Maamulka Koonfur Galbeed.
Taliye ku xigeenka Booliska Gaarka ah ee Maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Cari Case, ayaa sheegay deegaanka inay joogaan hada ciidankooda oo nabad ay ka jirto.
Al Shabaabkii ka baxay Deegaanka Goofgaduud ee Gobolka Baay, ayaa ku sugan meel aanan ka fogeyn Deegaankaasi.